Akụkọ - Akụkọ Companylọ ọrụ
Enweghi ike ịre ahịa nke ụlọ ọrụ ọgba tum tum na-enweghị atụ, na -emepụta ohere magburu onwe ya
China abanyela n'ọkwá nke ndị na-emepụta sprocket na ụwa, mana site n'echiche nke ike na mmepe niile, China na-emepụta kwa afọ nke ọgba tum tum bụ naanị 1/5 nke mba ndị mepere emepe, na ọtụtụ ọgba tum tum bụ ka n'uwa dum Na-enweghị oke ọkwa C, ọkwa mba ụwa nke ụdọ ndị China bụ ihe dịka 4.5%, yabụ China ka na-abanye n'ọkwá nke ike ụwa. Ya mere, ọ bụ isi nduzi mmepe nke ụlọ ọrụ na-emepụta ngwa ahịa nke China ịkwaga mba na-emepụta ngwa ahịa gaa n'ike ike na ụwa wee were ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ nwere njirimara ya.
Ọ bụ ezie na ahịa mba ụwa na-emetụta ihe ndị a na-ejighị n'aka na nke a na-ejighị n'aka, yana mmepe na-aga n'ihu ma na-agbanwe agbanwe nke ngwa ngwa mmepụta ihe na ụwa, ọchịchọ maka ngwaahịa na-etopụta ga-adịwanye ukwuu Karịsịa sprockets bụ ọrụ-kpụ ọkụ n'ọnụ na ngwaahịa. Ọ na-agbaso usoro ị nweta ụwa ma ọ bụ gbanwee gaa na mmepụta na mba ndị na-emepe emepe, na sprocket bụ ngwaahịa ọdịnala ndị China. Ọ ka nwere oke asọmpi na mba ndị ọzọ na-emepe emepe, nke na-eweta ohere ọhụụ na oghere mmepe maka oghere China iji gbasaa mbupụ. Ka ọ dị ugbu a, e kewara ahịa na-etolite na akara atọ: obere, ọkara na elu, na-egosi usoro bụ isi nke "ọkwa dị ala nwere mkpa, ọkwa ọkara nwere uto, ọkwa dị elu nwekwara olileanya". Otú ọ dị, sprocket nke China abanyebeghị n'ọnụ ụzọ ahịa dị elu.
Mmepe nke ụlọ ọrụ na-etolite etolite nwere ogologo akụkọ ihe mere eme, atụmanya mmepe dị ugbu a dịkwa oke obosara. Site na mmepe mmepe nke ụlọ ọrụ na-etolite, ọkọlọtọ ọkọlọtọ ga-eji nwayọ nwayọ ma ahịa na-achọ nwayọ nwayọ; abụghị ọkọlọtọ sprocket Ọchịchọ maka ngwaahịa na ahịa ahịa nke oghere niile ga-ebili nke ukwuu. Ekwesịrị ikwu na sprockets na-abụghị ọkọlọtọ bụ ntụpọ mmepe nke ngwaahịa niile na-apụta. Ike ahia ya di uku ma nwekwaa atumatu mmepe. N'otu oge ahụ, n'ihi na eriri ahịhịa na-arụ ọrụ nwere uru nke nnyefe eriri igwe na njirimara nke nnyefe nke ọkpọ, ahịa ahịa nke eriri eriri na-arụ ọrụ na ngwaahịa a ga-abawanye nke ukwuu, yana atụmanya mmepe ya ga-enwe ezigbo nchekwube. Enweghi ike igwu ahia n'ahia.
Akwụkwọ ndị na-abụghị ọkọlọtọ na wiilị eriri eriri na-anọchite anya ọdịnihu mmepe mmepe na usoro mmepe izugbe na usoro dum nke sprocket na ngwaahịa ndị ọzọ nnyefe. Ike ahia ha di otutu buru ibu ma nwekwaa mmepe di uku. A na-eji sprocket eme ihe n'ọtụtụ ebe na nnyefe nke kemịkal, igwe textile, nhazi nri, ngwa ọrụ, mmanụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Usoro nhazi nke sprocket na-emenyụ na elu ya gbara ọchịchịrị. Mgbe ọsọ ọsọ dị obere, iji sprocket nọmba ezé nwere ike belata oke ntụgharị nke njikọ m, ibu ọkụ nke agbụ na ibu ebu. Ihe nkedo nkedo a na-ejikarị eme ihe na nkedo nwere nkenke dị nkenke ma ọ bụ ụdị mgbagwoju anya, dị ka ịmepụta mgbanaka mgbanaka. Yabụ, ụlọ ọrụ na-etolite nwere atụmanya sara mbara n'ihe gbasara mmepe na itinye n'ọrụ.